Sida loo kiciyo muraajiceynta Chromecast | Androidsis
Francisco Ruiz | | Qalabka kale, Tababarada
Mid ka mid ah waxyaabihii aan ugu dambeyntii go'aansaday La wareegida Google Chromecast, waa sababta oo ah sida loo maleynayo cusbooneysiinta ugu dambeysa ee sheyga, tan ayaa horeyba loo oggol yahay muraayadda ama sidoo kale loo yaqaan shaashadda Cast kaas oo aan kari karno muraayad qalabkayaga Android waayo, u arag wax walba oo aan si toos ah uga qabaneyno telefishankayaga.
Xaqiiqdu way ka duwan tahay tan, waana taas kaliya boosteejooyin yar ayaa u oggolaanaya ikhtiyaarkan asal ahaan Chromecast-keena, iyo xitaa isagoo mid ka mid ah aaladaha iswaafajiya, sida LG G2, tan oo aan loo isticmaalin qalabka 'LG firmware asalka ah' iyo toogashada nooc ka mid ah Cyanogenmod snapshoot M8, oo ah shaqadii aan aadka u jeclaa. Shaashadda Kabka, lama heli karo ka Chromecasts. In kastoo, sida aad ku arki karto fiidiyowga cinwaanka maqaalkan, mahadsanid isticmaale ka yimid Horumarinta XDA, waa horeba waa macquul awood u siiya inaad ka dhex muuqato qalabka 'Chromecast' qalabka aan la taageerin.
1 Shuruudaha si ay awood ugu siiso muraajiceynta Chromecast aaladaha aan la taageerin
2 Sida loogu sahlo muraayadda Chromecast aaladaha aan la taageerin
Shuruudaha si ay awood ugu siiso muraajiceynta Chromecast aaladaha aan la taageerin
Shuruudaha kaliya ayaa ah in la helo terminaal shaqeynaya nooc ka mid ah Android 4.4 Kit Kat, iyo inay sidoo kale leedahay rukhsad superuser, waxaan ula jeedaa, aan haysanno xidid.
En Androidsis waxaad ka heli doontaa habab badan oo aad ku awood u rujin ku dhowaad qalab kasta oo Android ah kuwa jira oo leh casharro gaar ah tusaalahaaga, iyo kuwa kale oo leh casharro ama barnaamijyo guud taasi waa u qalantaa a Jaangooyooyinka aan dhammaadka lahayn ee Android.
para awood u siiya inaad ka dhigto muraayadda 'Chromecast' kuna raaxayso Shaashadda ku dheji boosteejooyinka loo tixgeliyo inaan la taageerin, waa inaad kaliya soo degsataa apk-ka aan toos ugaga tagayo sharaxaadda fiidiyow-ku-barashada ku jirta Kanaalka Androidsis You Tube.
Marka apk la fuliyo oo la rakibo, waa inaad raacdaa tilmaamaha ku jira fiidiyowga si aad u dhamayso Mirroring si sax ah ula Chromecast on boosteejada loo arkaa in aan la taageerin leh barnaamijka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Sida loogu sahlo muraayadda Chromecast aaladaha aan la taageerin
dhalanteedka geek dijo
Waxaan hayaa chromecast-ka iyo Nexus 5 (android-ka asalka ah iyada oo aan taabanayn) waxayna ii sheegaysaa in aanu la jaan qaadi karin. Run ahaantii wax ma jiraan? Tssss
Kajawaabida dhalanteedka geek
Waxaan kala soo degaa apk-ga Motorola X-ga waxayna ii sheegtaa in faylka aan la furi karin! ...
Maxaan sameyn karaa? Mahadsanid
Ku dhowaad wax walba waxay u muuqdaan kuwo qaabaysan. Maxay noqon kartaa?
LG G3, casriga ugu fiican dhamaadka-dhamaadka ah?
Samsung Galaxy Note 4 wuxuu yeelan doonaa aaladda shucaaca ultraviolet